Ungayisusa kanjani i-Akhawunti ye-Snapchat? - Komphakathi
Uchithe isikhathi esiningi ekulondolozeni i-Snapchat streaks futhi manje ufuna ukuyisusa yonke?Noma ngabe yisiphi isizathu sakho ukushiya i-Snapchat silapha ukukusiza ngakho. Namuhla kulokhu okuthunyelwe, silungiselele umhlahlandlela wesinyathelo nesinyathelo oningiliziwe ozokusiza ukuthi ususe i-akhawunti yakho ye-Snapchat futhi uzikhulule.
Lo mhlahlandlela uzoba nezindlela ezimbili zokususa i-akhawunti yakho ye-Snapchat nezinye izinto ongazicabangela kanye ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho.Ngakho-ke ngaphandle kokulibala, ake ungene kuwo ngqo.
Izibalo zeWhatsapp namaqiniso (2020) kufanele wazi
Izindlela Zokususa i-Akhawunti yakho ye-Snapchat:
Ukususa i-akhawunti ye-Snapchat kungumsebenzi wobudedengu. Ungasusa i-akhawunti yakho ye-Snapchat ngemizuzu embalwa nje uma ulandela lezi zinyathelo ezingezansi. Izinyathelo zokususa i-akhawunti yakho ye-Snapchat yilezi:
Indlela # 1 yokususa ku-Akhawunti ye-Snapchat:
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-Snapchat noma chofoza lapha .
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ngokufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi ye-akhawunti ofuna ukuyisusa.
Lapho usungene ngemvume, uzomiyiswa ekhasini le-akhawunti yokususa. Lapha kufanele ufake iphasiwedi yakho ukuze uqinisekise ukususwa kwakho.
Uma usufake iphasiwedi yakho bese ushaya ukufaka i-akhawunti yakho izosuswa unomphela.
Indlela # 2 yokususa ku-Akhawunti ye-Snapchat:
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-Snapchat ngokuchofoza lapha .
Uma usekhasini lewebhu elisemthethweni le-Snapchat skrolela ezansi kwekhasi lewebhu nangaphansi kwesigaba 'Somphakathi', chofoza ku-'Support '.
Ngemuva kokuphuma chofoza i-Snapchat Support chofoza kuthebhu ethi 'Akhawunti Yami Nokuphepha' okukhona ohlangothini lwesobunxele lwekhasi lewebhu.
Kanye ku-'Akhawunti Yami Nokuphepha 'uzobona ithebhu ethi' Ulwazi Lwe-akhawunti '. Chofoza kuso ukuze ubone izinketho eziningi.
Kuthebhu yoLwazi lwe-Akhawunti chofoza ku-'Susa i-Akhawunti Yami 'ezovula ibha yomlayezo ezoba nomhlahlandlela omfushane lapho uzothola khona isixhumanisi se-Akhawunti Portal esizoyisa ekhasini lokungena ngemvume le-Snapchat.
Faka iziqinisekiso zakho zomsebenzisi ze-Snapchat.
Ngemuva kokufaka imininingwane yakho yomsebenzisi ikhasi lewebhu lizothatha ukususa ikhasi le-akhawunti lapho kufanele ufake khona iphasiwedi ye-Snapchat ukususa i-Akhawunti yakho.
Izici Ezibalulekile Zokucabanga Ngaphambi Kokususa I-akhawunti Ye-Snapchat
Kungaba khona ezinye izinto ezidingekayo ukuthi uzicabangele ngaphambi kokuthi ususe i-akhawunti engabaluleka kuwe. Nazi izinto ezimbalwa okufanele uzicabangele ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho.
Uma ususule i-akhawunti yakho ye-Snapchat, zonke izithombe zakho nevidiyo egcinwe ku-akhawunti ye-Snapchat izosuswa, futhi ngeke ukwazi ukuyifinyelela.Ukukugwema, ungathatha isipele sazo zonke izithombe namavidiyo kudivayisi yakho, ngakho-ke unayo yonke imidiya ye-Snapchat ngaphambi kokulahlekelwa yikho konke.
Ngemuva kokususa i-akhawunti yakho ye-Snapchat, amaphuzu akho we-streak nabangani bakho angahle aphulwe okuzoba okucindezela kakhulu kwezinye iziqubulo ze-Snapchat.
Ngakho-ke lokhu bekuyiposi elifushane kepha eliphelele lokuthi ungasusa kanjani i-akhawunti yakho ye-Snapchat ngempumelelo ngesinyathelo ngesinyathelo sokulandelela. Uma unemibuzo ephathelene nokususwa kwe-akhawunti yakho ye-Snapchat bese usazisa ebhokisini lokuphawula elingezansi.
Susa i-akhawunti yakho ye-Instagram okwesikhashana